Inona no hitsidika ny Repoblika Czech | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, Repoblika Tseky
La Repoblika Tseky Io no iray amin'ireo toerana itadiavana indrindra eropeana, ary ny renivohiny, tanànan'ny Prague, dia toerana misy hatsarana tsy mampino. Ny trano mimanda, arabe antenatenany, sary voajanahary ary tanàna kely manome traikefa tokana dia zavatra hitantsika any amin'ny Repoblika Czech.
Androany dia ho hitantsika ny sasany amin'ireo toerana izay tokony ho anisan'ireo lehibe rehefa mitsidika ny firenena. Mazava ho azy fa tsy maintsy mamakivaky ny renivohiny ianao, izay toerana be mpitsidika indrindra, saingy misy zavatra maro mety hahaliana anao. Aza adino ny safidinay toerana hitsidika ny Repoblika Czech.
Inona no holazaina momba an'i Prague sy izay rehetra hitany. Iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa, izay mitazona hatsaran-tarehy antonony sy kanto sarotra hita ankehitriny. Raha te-hitsidika tanàna manan-tantara isika dia tsy isalasalana fa kandidà lehibe i Prague. Ao no tsy maintsy hitsidihantsika ny trano mimanda malaza, izay manjaka amin'ny tanàna any an-tampony ary izay fitambaran-trano lehibe mitaky fotoana. Etsy ankilany, tsy maintsy miampita ny Bridge Charles V ianao izay tsara tarehy, mitsidika ny Kianja Wenceslas afovoany ary jereo ny famantaranandro. Misy fiangonana, tranombakoka ary ny tapany jiosy mahaliana an'i Josefov.
Brno dia tanàna iray izay nijaly nandritra ny Ady Lehibe sy ny vanim-potoana kominista. Saingy niverina tamin'ny laoniny indray androany, mazàna satria izy dia tanàna oniversite quintessential ao amin'ny Repoblika Czech Ireo tranobe manan-tantara dia mampatsiahy ireo any Prague ary tsy namoy ny lazany izy. Ny androny tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo, noho ny orinasan-damba izay nanankarena ny tanàna, ary noho izany dia manana tsangambato sy faritra mahafinaritra hita. Ao amin'ny foibe manan-tantara dia afaka mahita ny Katedraly Masindahy Peter sy Masindahy Paul na ny Nanebevzetí Panny Marie basilica. Raha te-hivoaka amin'ny alina ianao, dia ity ny tanànanao, satria ny tontolon'ny oniversite dia ahafahana mitsidika teboka feno alina.
Ity tanàna ity dia malaza be any amin'ny Repoblika Tseky satria toerana spa ity handehanana miala sasatra. Misy aza Loharanom-pahasalamana 13 mba hitsaboana ny aretin-koditra ary hanana trano fandraisam-bahiny misy karazana spaoro isan-karazany. Mariánské Lázn?, Františkovy Lázn? ary Jáchymov no tanàna mafana hafa ao amin'ny firenena, miorina amin'ny faritra iray ifantohan'ny fizahan-tany amin'ireo spa sy rano fisotro misy fanafody ireo, miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny manolotra serivisy fahasalamana.
Ao amin'ny Faritra Moraviana Hitanay i Olomuc, tanàna iray taloha misy tranobe tsara tarehy ary loharano fito azo avy amin'ny angano. Ny tranobe manan-tantara dia rava tamin'ny taonjato faha-28 ary namboarina niaraka tamin'ny tranobe Baroque tsara tarehy. Tanàna manana fiangonana hatramin'ny XNUMX izy ary eo amoron-dranomasina dia ahitanao ny tilikambon'andriana. Amin'ny lafiny hafa amin'ny kianjan'ny Hall Town dia ahitanao ny fiangonana Gothic any San Mauricio. Tsy hadino koa ny Katedraly Gothic St. Wenceslas na ny Lapan'ny Arseveka.
Tsy dia lehibe loatra ity tanàna ity, saingy misy manintona ary ao no ahafahanao mitsidika toerana toa ny Pilsner Urquell Brewery. Ao Pilsen dia afaka mivezivezy amin'ny arabe ianao ary mankafy ny fifangaroan'ny tranobe maoderina kokoa amin'ny hafa tamin'ny taonjato lasa. Ny afovoany dia ny Plaza de la República, izay misy ny Katedraly San Bartolomé. Ny lapan'ny tanàna mihitsy dia manana trano Renaissance tsara tarehy izay tsy mamela anao tsy hiraharaha.
Ostrava dia tanàna iray tena lehibe nandritra ny revolisiona indostrialy, satria nisy indostria vy sy vy lehibe noho ny fitrandrahana arintany. Androany ity tanàna ity dia toerana fizahan-tany kokoa, izay mbola misy orinasa, toeram-pitrandrahana ary indostria nanomboka tamin'io fotoana io, ho an'ireo liana te hahafantatra bebe kokoa momba ity ampahany amin'ny tantarany ity. Ny toeram-pitrandrahana Michal dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ary manana kojakoja voatahiry tsara. Etsy ankilany, raha te-hanao fety isika, amin'ny arabe Stodolní dia azo atao ny mankafy atmosfera tsy simba, mampiseho tanàna maoderina sy velona kokoa.
Avy tany amin'ny tanànan'ny Repoblika Tseky izahay nankany amin'ny tanàna kely iray, satria eto ny zava-drehetra dia misy manintona manokana sy misy fiatraikany hafa. Kraví Hora dia fantatra amin'ny Repoblikan'ny divay, zavatra hafahafa omena izay fantatry ny firenena amin'ny labiera fa tsy amin'ny divay. Voahodidin'ny tanimboaloboka ny tanàna izay alaina ny akora mba hanaovana divay. Ao amin'ity tanàna misy arabe maromaro ity, manana trano fitahirizan-tena manokana ireo trano ireo, saingy nanonta ny volany ihany koa izy ireo, manana filoham-pirenena, lalàm-panorenana, fadin-tseranana ary maro hafa izy ireo mba ho toerana mahaleo tena tanteraka. Toerana tena mahafinaritra, tany am-boalohany ary manokana any amin'ny faritra Moraviana atsimo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Inona no hitsidika ny Repoblika Tseky
Fananganana Mega 8 Mahagaga any Shina